Mushroom inkukhu nge nje igama original, eqinisweni, ngokwesayensi ukubizwa ngokuthi i-caps ringed. Lolu hlobo mushroom esivamile ngokuyinhloko emahlathini asezintabeni, nasemathafeni. -Turks pribolotnik rozites ezimhlophe dim ... Konke lokhu - igama, okuyinto edume ukubizwa ngokuthi inkukhu amakhowe.
Iza phambi kohlobo YaseYurophu rozitesov ezidliwayo. inkukhu mushroom isigqoko sibe ngamasentimitha kuze kube nanhlanu. Abasakwazi esinamanzi, ne isivalo kolpakovidnoy, ukuze ithole igama kwawo kwezesayensi. Thina Kwehla onqenqemeni cap nombala ompunga noma ephuzi noma ocher. "Inkukhu" Young - amakhowe, isithombe esibonisa kubo ukufana enkulu ngokwanele nalo lonke cortinariaceae, le zikhula ukusakaza cap yabo eyindilinga noma amaqanda emise, kancane kancane ngokuba ayisicaba isikhungo ephakanyiswe. Ngo abadala pribolotnikov noma-Turks inyama ithambile futhi flabby, ekuqaleni mhlophe, yellowing kamuva.
Ngokuvamile, amakhowe inkukhu, isithombe kanye nencazelo okuyinto libonisa ukuthi cortinarius ezithi azifane, ngaphambili okucatshangwa ukuthi amalungu kwalesi silwane. Labo-alimondi yayithandwa warty ezinhlamvu ziyefana esikhathini esidlule. Nokho, amakhowe inkukhu ungalokothi ube pautinchatoy umgubuzelo phakathi emaphethelweni cap kanye stem. Lezi zingqimba iyivelakancane futhi adherent nge engalingani.
Umlenze kule omele rozitesov eqinile, ukuma cylindrical, ngasesinqeni obukhulu nge okuqinile kasilika fibre ebusweni.
Mushroom inkukhu, isithombe esibonisa ukuthi zifana kakhulu izinhlobo ezithile izimvukuzane, ezifana izinhlobo esiqinile noma ekuqaleni kuka mycorrhiza ngokuyinhloko coniferous zinhlobo isihlahla, nakuba ngaphansi kwama-oki birches bathola akukho kancane njalo. Phakathi ezweni lethu band bona ingalandwa ezindaweni mossy e zikaphayini noma amahlathi okuxubile.
Ezindaweni entabeni zingabantu ngisho ezingeni ukuphakama kwamamitha ayizinkulungwane ezimbili. Iningi amakhowe inkukhu ezivamile eNtshonalanga Yurophu nasemazweni Belarus. Ezweni lethu, zivamile ngaphezulu ihlathi ezindaweni elimanzi emaphakathi neRussia ku zolistyh futhi podzolic izinhlobo umhlabathi. Lezi isikhunta uthanda ukuba bazohlala amahlathi okuxubile, kodwa bavame ezitholakala coniferous okumsulwa, ngaphandle-ke, kukhona izinto ezimnandi ezimanzi futhi kukhona zonke izimo ezidingekayo ukuze sizale nokukhula.
Yiqiniso, lokhu rozitesov omele Akunakwenzeka ukuthi lalotshwa ezivamile futhi ezithandwayo. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ngenxa unpopularity of indima enjalo ephawulekayo kukhala abanye zifana aso toadstool. Nokho, labo abake wazama lezi amakhowe cishe ukubuyela ukupheka kusuka insimbi ringed.
izinkukhu Mushroom Ukusesha ukuqala maphakathi no-Agasti. Isizini ingahlala kuze kube sekupheleni kuka-October. Babathanda yaleli ukhunta ezihlabayo aluhlaza okwesibhakabhaka kanye cranberry. Ngemva Ukuvalwa bekha amajikijolo ke cishe zapolonyayut ngokuphelele beka esiphelweni yabo ngamaqembu amakhulu. Futhi kuvela elinye iqiniso elithakazelisayo: izinkukhu zikhule kuphela ezindaweni imvelo.
Leli akulona grey mushroom
Isikhathi esining impela mushroom inkukhu imfundamakhwela abalandeli "ukuzingela sokuthula 'sithathwa engenakudliwa ngobubi bawo futhi ungathathi enqoleni yakho. Kodwa lena ngokuphelele abuqinisile. Lezi abameleli rozitesov uphakathi kwabantu abangenalo leli wesine e izici ukudla kwayo. Zingasetshenziswa e abilisiwe usawoti. Banezinhliziyo enkulu kakhulu amakhowe iphunga nokunambitheka enkulu.
Ngaphandle CAPS ringed noma inkukhu kakhulu okusikhumbuza toadstools grey. Kodwa zihlukaniswa kalula kulezo zinto. Vele ukuhlola ebusweni engaphakathi cap. Kube ngokufanele ipuleti kokuba Umbala ophuzi kanye nonsundu. Isici esiphawulekayo mushroom wukuthi ababengayisebenzisa ibuphi ubudala zihlale qwa.
Kukhona umehluko isakhiwo of the imilenze. Okokuqala, it is a indandatho, elise ngezansi nje cap yabo. It has a ithoni umbala ukhunta. Kancane ngenhla kukhona izikali ezincane aphuzi. Ngaphandle kwalokho, umlenze ngezansi iringi ohlabayo kuka phezulu.
Lezi esihlwabusayo inkukhu amakhowe
Indlela ukupheka cap ringed, akubona bonke uyazi. Nokho, labo sebekujwayele ukunambitheka kwabo, cabanga ukuthi ngesimo ethosiwe, zingabantu nje Yinhle. Ukuze kulungiswe Culinary wobuciko inkukhu enjalo ukuhlanza futhi uxubha kahle. Abanye besifazane like ngamathumba yabo yokuqala, futhi gazinga ke kamuva, abanye bakhetha brown nabo ngamafutha amasha. Yeka indlela lezi isikhunta - indaba ukunambitheka, kodwa okuhle ikakhulukazi Batter ezenziwe ngofulawa, amaqanda, imayonnaise kanye nezinongo. Okokuqala, udinga ukuba agcobhoze inkukhu kuwo, khona-ke Roll in isinkwa imvuthu kanye wagqoka ashisayo ukuthosa epanini, okuyinto vele sizzling amafutha sunflower. isikhathi sokupheka - amahlanu noma eziyisikhombisa imizuzu.
Zilungiselele leresiphi kudliwa ngokushesha. Ukunambitha mushroom inkukhu, izithombe zazo kancane sifana fly agaric, efana ithenda inkukhu inyama.
Ofeleba ringed isivuno ebusika ngezindlela ezihlukahlukene: bona futhi enososo usawoti, kodwa kudingeka siyinake inketho ekhethekile pickled. Ukunambitheka lezi amakhowe ozuza sharpness imiva, okuyinto kubonakala umlomo abukhali Bubbles kancane.
Iresiphi, ngawo isibilile inkukhu, lula ngokwanele: eyodwa ikhilogremu amakhowe uzodinga ayisithupha amagremu kasawoti, peppercorns ambalwa - omnyama elimnandi. Kusadingeka ukuba horseradish, garlic, i-bay leaf imbewu lwesinaphi kanye dill.
Amakhowe blanched in abilayo amanzi anosawoti, kuphekwe ngesilinganiso eyodwa isipuni sikasawoti ilitha lamanzi ngalinye imizuzu emihlanu noma eyishumi. Base zihlale ngesihlungo, wageza ngamanzi abandayo kanye avunyelwe sokukhipha.
Ngemva kwalokho kudingeka uhlanganise amakhowe nge izinongo usawoti esisele esitsheni eyenzelwe lwezithelo olubangela ukubila. Ungqimba ke limbozwa ngendwangu ehlanzekile, okuyinto ibekwe phezu club lokhuni noma plate, laphezu kwazo kulotshiwe ngokwamazwi ijoka. Kvass amakhowe izinsuku ezinhlanu kuya kweziyishumi, kuye ngokuthi ezingeni lokushisa elifanele. Ngemva kwalokho kufanele bayeke emabhange kanye agcinwe kule esiqandisini.
Flying squirrel: ehuquzelayo igundane
Izilwane Urals. IRed Encwadi Urals
Kanjani amaqanda inkwethu? Umbala amaqanda Amazing songbirds!
Futhi niyazi ukuthi mlilo?
Itiye Kalmyk iresiphi elula: izici ukupheka kanye nokubuyekeza
Ungangabazi noma yini futhi ujabulele ukuphila!
Kuyini ukubekezela kwamaZwe? Injwayelo yokufuna ukuba nobudlelwane interethnic
Burning ngesikhathi ukuchama ezingabantu
I-bacterium umchamo ngesikhathi sokukhulelwa: Ingabe kuyingozi futhi yini okufanele uyenze?